Izithuthuthu 400 cubes - onobuhle Chinese, isi-Japanese futhi Russian: Ukucaciswa
400-cc izithuthuthu - omunye ezingabizi kakhulu emakethe yesibili, amanani aphansi, ngisho okubizwa ngokuthi "big four» Japan - Kawasaki amafemu, Honda, Yamaha kanye Suzuki. Nokho, izithuthuthu kanye injini umthamo, ngaphezu phakamisa ngokuphelele amanani, kukhona kokubili ubuhle ezithile ezingathandeki, noma, kunalokho, ikakhulukazi.
Ngenxa yokuthi ngentengo elincane, ungaba umnikazi wekhasi iyunithi ngempela okuhle, izithuthuthu 400 cc kade futhi ahlale ethandwa eRussia futhi izwe elaliyiSoviet Union ngaphambili. Ukuguga, cishe akekho udidekile ngoba amazwe akhiqiza iqaphe izinga owawenziwa yimishini. Endabeni 400-cc izithuthuthu Japan nabo bonke zenzelwe kuphela emakethe yasekhaya. Lokhu kungenxa izici intela. Ngokwesibonelo, isithuthuthu Yamaha SR 400 kwase kuqala wadedelwa ngo-1978 izinguqulo ezimbili: 400 no 500 cubic metres, emakethe yasekhaya futhi kwamanye amazwe, ngokulandelana. Umahluko kulokho izithuthuthu ezimbili, ngaphezu amandla cubic, nasemihleni piston.
Kodwa ukuhlangabezana ubudala isithuthuthu Chinese cubes 400 engenakwenzeka kuleli zwe akuvunyelwe izimoto ezimbili ezinamasondo nge umthamo injini abangaphezu kuka-250 cm 3, futhi obunamandla cubic abakhiqizi Chinese ukukhiqiza kuphela ukuthekelisa. 400 cc iseli Chinese amafoni yaqala ukubonakala ku igagasi ukwanda phakathi nabagibeli, ikakhulukazi Wabasaqalayo, lokhu usayizi injini.
Ukuze uthando lwabo
Ngaphezu intengo, 400 cc emabhayisikili kukhona esinye isici. Lokhu ukubukeka. Njengoba kushiwo ngenhla, imodeli Japanese lokhu usayizi zavezwa ikakhulukazi emakethe yasekhaya yezwe, futhi onobuhle eziningi ayatholakala nale ivolumu, ezifana okufanayo Honda Bros kukhiqizwa futhi njengendlela-cubes 650. Small uphethiloli ukusetshenziswa (kusuka 4 amalitha ngamunye amakhilomitha 100 lapho ushayela emgwaqweni omkhulu, kuye ngokuthi izimo sezulu kanye nesivinini) kuzovumela ukufunda ukugibela, hhayi kakhulu ukuchitha uphethiloli. Kodwa kunenye inzuzo ebaluleke - kungcono isisindo. Izithuthuthu cubes 400 nesisindo okuyisilinganiso sabangu-150-180 kg. Ayikho Motorcyclists abangafuni liwe, (ikakhulukazi abesifazane), udinga ukugibela isithuthuthu, okuyinto umuntu uyakwazi aphakamise komgwaqo. Ngaphezu kwalokho, kukhona amacala lapho kubalulekile ukuthi unikezele ibhayisikili (lena akuyona ukwehluleka njalo, ngezinye izikhathi kungaba, isibonelo, "ukuhambahamba" i-plug).
Ideal for Wabasaqalayo
indoda Sane neze ekhetha "ihhashi" ngesithuthuthu sakhe sokuqala obunamandla cubic. Le nqubo ibizwa hhayi bahlakazeka kakhulu kuphela, ngokushesha okukhulu (imizuzwana 1-2,8 kuze amakhilomitha angamakhulu kusuka phansi 600 we ibhayisikili), kodwa futhi unalo wagxila abukhali futhi, yebo, amabhuleki kakhulu. Ukuze lokhu kufanele wanezela ukuthi ngejubane iyiphi iqhinga kumele ngokunembile alinganisiwe, ngakho phakathi zifiki nokungalawuleki enamandla ziyinsakavukela ziwa ukulahlekelwa ukulawula noma ngenxa yokuthi "kude kakhulu ne amabhuleki."
Izithuthuthu 400 cubes mahle Wabasaqalayo. Omunye angase athi nomqulu omncane efana, ngokushesha ngizithola futhi ufuna okuthile okwengeziwe, futhi kuyoba okungalungile, ngoba umshini 400-cc kalula "ukwenza" noma iyiphi imoto futhi asheshisa amakhilomitha angamakhulu amabili ngehora. Kodwa Racing umshayeli amakhono kubaluleke ngaphezu amandla injini. Kodwa ngisho noma imfundamakhwela umgibeli beveza banquma ukungayisebenzisi nhlobo i ukushayela "shestisotke" yabo uze bajwayelene ukuphathwa, lutho insures kuye kusukela amacala ahlukahlukene endleleni, lapho ingqondo ohlakaniphile ozofakwa futhi elisheshayo lesifanele uyakukusindisa kusukela kungadaleka ingozi embi kakhulu. Hhayi kokuba amakhono eyanele ukuvula bezikhali 400 cubic metres, likhona yini umuzwa ukuthatha okuthile okukhulu?
400-wesikhamo izithuthuthu Japanese abantu ikakhulukazi yakudala njengoba, ngokwesibonelo, Honda Bros 400 - imodeli ne emaweni design nolaka futhi cylinder ezimbili injini V emise, ukuveza 1988 kuya 1992. Ngakho, "chetyrehsotke" Japanese kungenzeka ukuthi kakade eko ngasekupheleni, futhi amasu ukunakekelwa kahle kungaba isikhathi eside, kodwa abangakwazi ukuqinisekisa ukuthi umnikazi owayeyinhloko kahle kulandela ibhayisikili lakhe? Kukhona onobuhle empeleni esasisesisha, isibonelo, i-Honda CB400SS, eyakhishwa ngo-2005, kodwa ukuthengwa imishini esetshenziswa - njalo uhlobo ilotho: pheze ungalokothi akunakwenzeka ukwazi lokho mileage kulokho lebanga ordometr njengoba kwakunjalo abanikazi nendlela ukusevisa umshini. Abaningi abashayeli abanganaki futhi ungacabangi ukuthi kudingekile ukuba ukuqapha kahle imishini, wazi ukuthi ukuthengisa emva ezimbalwa zonyaka, ngakho uma ungenawo baqonde Izithuthuthu, ku ukuhlolwa kudingeka ukuya umakhenikha - eziningi amasevisi ngenkokhelo sipho encane le sevisi, noma okungenani ukuletha umngane wakho umgibeli ebona.
Ubudala - ububi eyinhloko ezinzulwini 400-amahhashi, e ngokuqondene nokuzalwa kanye yenkinga yosesho ye-izingxenye ezisele. Ngakolunye uhlangothi, abakhiqizi Chinese wabona umthamo cubic kule emayini yegolide, waqala ukuveza onobuhle ukuthekelisa, ikakhulukazi eRussia CIS amazwe. Kuyinto imodeli yimpumelelo kwakungamaShayina isithuthuthu 400 cc Lifan LF, manje elitholakala esifundeni Moscow, Zhukovsky, wabiza Stels 400 Cruiser. Domestic Stels inkampani ngempela ngempumelelo wajoyina emakethe, ukukhulula yakhe isithuthuthu 400 cubic metres, intengo futhi aphume jikelele kule niche, futhi 100-150 eziyinkulungwane yedivayisi entsha. Eqinisweni Stels Cruiser kanye Lifan LF engumfanekiso Yamaha Virago, umfuziselo yimpumelelo kakhulu, kukhiqizwa nineties futhi ngenxa Chinese auto umkhakha sizothola impilo entsha.
Ngakho, uma ukuba afingqe, izithuthuthu 400-cubes kungaba Japanese noma IsiShayina (yeka okuhlukile ezingavamile). Ngaphambi ngesithuthuthu kutholwa ithuba: noma Chinese entsha noma indoda Japanese ubudala, okuyinto engcono? Akukho impendulo eyodwa. Ukuthenga art Chinese - ukuthi ngisho ilotho, ngoba leli lizwe kungenziwa ngokuthi iqhawe nobuningi komshado endaweni yokukhanda. Mhlawumbe umnikazi uyothwala, kanye Lifan efanayo ugijima ngaphandle ukwehluleka neminyaka embalwa yokuqala, futhi othile uhlobo olufanayo ungakwazi ukugqashula amaviki ambalwa. nabagibeli abanolwazi belulekwa ukuba ngilungise isithuthuthu Chinese ngokushesha emva kokuthenga, ukuqeda, uma betholakala khona, esikhundleni amaphutha inhlangano nezingxenye eliphansi, futhi kuphela ke hamba. Kulokhu, inqubo uyokhonza kahle. Ngaphezu kwalokho, umnikazi bangathembela isiqinisekiso, okungekho muntu, yebo, ngeke unike lapho uthenga imishini esetshenziswa.
izithuthuthu Japanese, ukushintshashintsha eshumini lesibili ngisho lwesithathu, futhi, kungaba "abasha" ngabantu bangaphandle kuphela. Uma ibhayisikili obabusezandleni ezinhle, akasoze akuvumele phansi ngeke ube umngane onokwethenjelwa. Uma Nokho, aphethwe ukuphila layo ezimbili ezinamasondo ngaphandle ukunakekelwa efanele - ngeke kube inkinga umnikazi omusha, ikakhulukazi uma ucabangela ukuthi onobuhle eziningi manje kunzima kakhulu ukuthola izingxenye.
Futhi iminyaka ihamba, noma mayelana ukudayiswa "Asians"
Ngokuhamba kwesikhathi kwabahamba ngesithuthuthu banesifiso ukushintsha ezokuthutha zabo, libhayisikili uzodinga ukuthengisa. Naphezu kweqiniso lokuthi entsha 400-cc isithuthuthu ukuthenga Chinese izobiza kakhulu ngendlela ixhegu kanye Japanese, ngemva kweminyaka emibili noma emithathu walahlekelwa kakhulu intengo. moto ukubaluleka uwela ngokushesha, ikakhulukazi izimoto Chinese. Ukuze uthengise ihhashi layo Chinese, ngize ngilimaze off ingxenye yesithathu intengo yokuqala, kungaba nzima, ngoba abantu bakhathazekile of China auto umkhakha.
Kodwa isithuthuthu engu-Japanese of 20 ngisho neminyaka engu-30 cishe akaphelelwa emalini labo ngoba eminyakeni emibili, okuyinto kuzodinga umgibeli ukuba abhodloze ibhayisikili lakho okuqala ukuqonda ukuthi yini ofuna kusukela ubuchwepheshe. Thengisa ke Kuyoba Noma ngabe yikuphi silula kunaleso uzakwabo Chinese.
Kancane okwengeziwe zifiki
Motorcycle 400 cubic metres - iyithuluzi ujabule, kodwa namanje hhayi ithoyizi. Njengoba kushiwo ngenhla, ke kuyayikhinyabeza isivinini imoto futhi ungamisa kuze kube amakhilomitha angamakhulu amabili ngehora, kodwa ibhayisikili ngokwanele ezolile futhi uthethelele imfundamakhwela namaphutha athile. Nokho, uma isipiliyoni ukushayela abaningana, kufanele kuthathwe ngesithuthuthu leqembu ngokuqapha futhi uqaphele ukuthi lokhu akulona Moped. izimo ezibucayi zenzeka endleleni, kungaba hhayi kuphela izenzo abanye abashayeli, kodwa futhi maholoholo ebusweni. Ngisho e igesi esinamandla imoto peredavlenny noma ukubopha kakhulu ngokucijile ecindezelwe ikakhulu uholela nje kuphela ukulahlekelwa kwezimali - amabhampa dented, fenders, njll, futhi ibuyisele clamping kwabhoboka phambi isithuthuthu kungaholela embhedeni wasesibhedlela. Ngakho-ke, ngaphambi kokuba sikhethe ibhayisikili, udinga ukuba ambonise izidingo ezicacile, hhayi ukubheka amandla ngokukhetha into "ngaphezulu evele" ngenxa yokuntuleka kwezinhlelo ezibanzi ilwazi namakghono, okuhloswe ngaso ekusebenziseni ibhayisikili wokwakha.
Scooter 50 cubes: abaholi ezintathu
Isithuthuthu "I-Java-640": incazelo
Kim Manners - indoda eyanikeza izwe "X-Amafayela" futhi "esingajwayelekile"